'Ibsi mirga wabii kabajuurratti baafne barfateera jedhee hin yaadu'- Komishinii Mirga Namoomaa - BBC News Afaan Oromoo
'Ibsi mirga wabii kabajuurratti baafne barfateera jedhee hin yaadu'- Komishinii Mirga Namoomaa
Madda suuraa, Komishinii Mirga Namoomaa Itoophiyaa
Komishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa ibsa gabaabaa baaseen ''Ajaja Manneen Murtii kabajamuu dhabuun kabaja mirga namoomaaf balaadha,'' jedhe.
''Hidhaa hin barbaachifne hambisuun, mirga wabii kabajuun barbaachisaadha,'' jedheera ibsichi.
Lammummaa Ameerikaa kan qabu Mishaa Cirrii dabalatee namootni mirgi wabii mana Murtiin eegameef adeemsi seeraa barbaachisu xumuramus gadhiifamaa akka hiin jirree abukaatoowwaniifi maatiirraa komiiin irra deddeebiin dhagaahama.
Guyyoota dura qarshii birrii 100,000 qabsiisanii wabiin akka bahan kan murtaaheef namni siyaasaa Obbo Lidatuu Ayaleewis hanga ammaatti akka hin gadhiifamne ibsi Komishinichaa ni hima.
Komishinichatti gorsaa ol-aanaa kan ta'an Obbo Misgaanaawu Mulugeetaa, '' Obbo Lidatuu dabalatee hidhamtootni manneen murtii wabiin akka gadhiifaman ajajee adeemsa wabiin bahuu kan xumuran hunduu atattamaafi haalduree tokko malee hidhaa hiikamuu qabuu'' jedhaniiru.
Wabiin kabaja mirga namoomaa Murteen Manneen Murtii Kabajamuudhas jedhaniiru Obbo Misgaanaawu.
Ibsi kun hin barfannee?
Kanaan dura Gaazexessaa lammii Keeniyaa Yaasiin Juumaa, Hoogganootni ABO fi miseensonni, akkasumas shakkamtootni biroon qarshii mirgi wabii ittiin eegame erga kaffalanii booda qaama poolisii birootiin fudhatamuu ykn ammoo Poolisiin sababa biraa dhiyeessuun akka hin baane dhorkamuu gabaasaa turre.
Ibsi Komishinii Mirga Namoomaa Itoophiyaa kun hin barfannee jedhee gaaffii BBC'n gorsaa ol-aanaa Komishinarichaa Obbo Misgaanaawuuf kan dhiyeesse yoo ta'u ''hin barfannee'' jedhan.
Gabaasni Komishinii Mirgoota Namoomaa Itoophiyaa qeeqame
Komishiniin mirga namoomaa garee dhiittaa mirgaa hordofu hundeessuusaa ibse
''Kanaan durallee Komishinichi namoota hidhaa jiran hordofaa ture, hordofaas jira. Waan hordofaa jirru marammoo ifa goona miti. Garuu kan amma baasne kana waan tibbana ta’e ka’umsa godhanneeti.''
Gochawwan akkasii irra deddeebiyaa jiru kan jedhan Obbo Misgaanaawu, ''namoota akka kanaa beekamoo hin taaneefi maqaan adda hin bane ammoo mirgi wabiin gadhiifamuu hayyamameef akka poolisiin hidhamanii turan eeruun nu qaqqabe hedduutu jira'' jedhan.
''Kan Obbo Lidatuu beekamoo waan ta’aniif namoonni hedduun waa’ee isaanii waan hordofaniif, agarsiiftuu gaarii ta’a jenneeti malee wanta ammallee ta’aa jirudha; waan kana ta’eefis tureera jedhee hin yaadu ani.''
Dhimma kanarratti ''karaa keessaatiinis'' mootummaa waliin haasa’aa jirra iiti baha isaa uummataafis ifa goona jedhaniiru.
Hangam bu’a qabeessa ta’a kan jedhuuf ammoo, nuti akka keenyatti mirgoota namoomaa kabajuufi kabachiisuuf adda durummaan itti-gaafatamummaa mootummaadha yaada jedhus kennaiiru.
Ji'oota dura dhimma Qaamoleen nageenyaa namoota mirgi wabii isaanii eegameefi akka gadhiifaman murtaaaheef dirqamaan tursiifamuurratti Pireezidantii Mana Murtii Waliigalaa Federaalaa Obbo Solomoon Araggaa dubbifnee, ''Manneen Murtii ajaja kana dirqisiisanii raawwachiisuuf aangoo qabu'' jedhanii turan.
Manni murtii ajaja dabarsee murtiin sun kan hin raawwanne yoo ta'e, qaamni murtiin kun naaf hin raawwatamne jedhe mana murtii ajaja kennetti deebi'ee iyyachuu qaba jedhu.
Obbo Misgaanaawu qaamoleen mootummaa ibsa isaan baasan bu’uura godhachuudhaan ''tarkaafii sirreessuu ni fudhatu jedheen abdadha fudhachuus ammo qabu,'' jedhan.
''Sababiin isaa ammoo ol-aantummaa seeraa kan jedhu bu’uurri isaa murtee manneen murtii kabajanii socho’uudha.''
Komishiniin Mirgoota namoomaa Itoophiyaa: 'Haalli qabiinsa mirgaa sirreeffamtootaa xiyyeeffannoo addaa barbaada'
27 Waxabajjii 2020
2 Adooleessa 2022
Hojii fi guddina barbaadnu argachuuf attamiin of haa ibsinu?
Yeroo dhuma kan haaromfame: 23 Guraandhala 2022